क्षेत्रीय अस्पतालमा गर्भवति महिलाको मृत्यु, आफन्त भन्छन्ः अस्पतालको चरम लापरबाही – Online Jagaran
सुर्खेत, २१ वैशाख (जागरण) । मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतमा उपचारका क्रममा गर्भवती महिला र उहाँको पेटभित्र रहेको बच्चाको मृत्यु भएको छ ।
महाबु गाउँपालिका ३ कालिकोटकी ३२ वर्षिया मनिषा सिंहको आज बिहान मृत्यु भएको हो । मनिषाका आफन्तले अस्पतालको लापरवाहीका कारण मृत्यु भएको आरोप लगाएका छन् ।
सामान्य अवस्थामै रहँदा जाँच गराउन अस्पताल आउनुभएकी मनिषाको गुप्तांगबाट पानी बगेको भनी हात हालेर पानीका पोका फुटालेर भर्ना गरेको आफन्तले बताएका छन् ।
हिजो विहिवार बिहान ११ बजे अस्पताल पुग्नुभएकी उहाँलाई दिनभरी सुत्केरी व्यथा नै नलागेको मृतककी दिदी गोमा शाहीले बताउनुभयो । अस्पतालमा दिनभरी मनिषाले आफूलाई बचाइदिन भन्दै हार गुहार गर्दा पनि राती १ बजेसम्म पनि उपचारका लागि गर्भवति महिला नजिक डाक्टर नपुगेको मृतककी दिदी गोमाले बताउनुभयो ।
अस्पतालका डाक्टर तथा नर्सहरुले बिरामीलाई भेट्नका लागि आफन्तलाई भित्र जानसमेत नदिएको आफन्तले बताएका छन् । बिरामीलाई आफन्तले भित्रै गएर भेटेमा ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिराउने भन्दै चेतावनी दिएको पनि उनीहरुले बताएका छन् ।
विलाप गर्दै आफन्तहरु ।
सुत्केरी व्यथा नै नलागेकी मनिषालाई त्यही समयमा सुई लगाइदिएको र जबरजस्ती छातीमा थिचेको पनि मनिषाकी दिदी गोमाले बताउनुभयो । मनिषाकी आमा कौशिला शाहीले पनि अस्पतालको लापरवाहीले नै आफ्नो छोरीको मृत्यु भएको दावी गर्नुभएको छ ।
उपचार गर्न नसक्ने भए क्षेत्रीय अस्पतालले अन्तै लैजान सुझाव दिएको भए आफूहरु बाहिर लैजान सक्ने बताउँदै त्यस्तो सुझावसमेत नदिएको आफन्तहरुको दावी छ ।
अस्पतालले जानी जानी लापरवाही गरेको भन्दै आमा कौशिलाले दोषीलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । साथै मनिषाको एक छोरा र छोरीको सम्पुर्ण जिम्मा पनि अस्पतालले लिनुपर्ने आमा कौशिलाको भनाई छ ।
घटनापछि तनावपूर्ण अवस्था
यता, अस्पताल प्रशासनले भने मृतकका आफन्तले गरेको दावी अस्वीकार गरेको छ । मनिषाको उपचारमा संलग्न गाईनोलोजिष्ट डाक्टर अमित सिंहले मनिषालाई सुत्केरी व्यथा लगाउने औषधी भने दिईएको स्वीकार गर्नुहुन्छ । बिरामी गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेको भन्दै उहाँले मुटुको चाललाई गतिमा ल्याउनका लागि सीपीआर (मुखबाट अक्सिजन दिने र छातीमा चेप्ने) काम गरिएको प्रस्ट पार्नुभयो ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डाक्टर डम्बर खड्काले डाक्टर र नर्सहरुको लापरवाहीले मनिसाको मृत्यु नभएको दावी गर्नुभयो । खड्काले प्रसव व्यथा शुरु भएपछि पाठेघर भित्र रहेको पानी रगतको माध्ययमबाट फोक्सोमा गएपछि एक्कासी उत्पन्न हुने समस्याका कारण यस्तो भएको उहाँले बताउनुभयो ।
डाक्टरहरु अस्पताल परिसरमै हुन्छौं, कतै अप्रेशन गर्दा पुग्न केही ढिलाई भएको हुनसक्छ’ खड्काले भन्नुभयो,–‘अस्पतालमा आएका विरामीहरुलाई मार्ने हाम्रो उदेश्य हुँदैन तर मनिषाको हकमा फ्युड इम्बोलिजम भएको हो, यो समस्या कोही कोही बिरामीलाई देखिन्छ, कहीँ पनि बिरामीलाई बचाउन सकिँदैन ।’
मरेकै बच्चा तीन दिनदेखि पेटमा, अस्पतालले वास्ता गरेनः
यसैबिच, दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिकाकी चाकुरी वि.क. तीन दिनदेखि पेटमा दुई वटा मृत बच्चाका साथ अस्पतालमै उपचारका लागि भर्ना हुनुभएको छ ।
वैशाख १७ गते दैलेखमै जाँच गराएर १८ गते चाकुरी र उहाँका आफन्त हरी वि.क. क्षेत्रीय अस्पताल आउनुभयो ।
१९ गते भिडियो एक्सरे गर्दा दुई वटै बच्चा मृत भएको जानकारी अस्पताल प्रशासनले हरीलाई दिएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि चाकुरीको अप्रेशन हुन सकेको छैन । वेवास्ता नगर्न आग्रह गर्दा आफूलाई डाक्टरले उल्टै हप्काएको आफन्त हरीले बताउनुभयो । अस्पतालले भने अवस्था हेरेर अप्रेशन गरिने बताएको छ ।
बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छानबिन समिति गठन
७ आश्विन २०७६, मंगलवार ०७:१२ September 24, 2019 जागरण
हुम्लामाका विभिन्न ठाउँमा पहिरोले चौबिस घरमा क्षति
८ असार २०७८, मंगलवार ०६:२६ June 22, 2021 जागरण
२३ बैशाख २०७५, आईतवार ०२:५४ May 6, 2018 जागरण